काठमाण्डौ । काठमाडौंको सुन्धारास्थित मुसफिर मदिनी मस्जिदमा तोडफोड भएको छ । शनिबार बिहान नचिनेका मानिसका समूहले डोजर लगाएर मस्जिद अगाडिको भाग तोडफोड गरेका हुन् ।
मस्जिद भत्काइएपछि काठमाण्डौमा रहेका मुस्लिम समुदाय चिन्तित र आक्रोशित बनेका छन् । मस्जिद परिसरमा भेटिएका मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम अन्सारीले भूमाफियाले जग्गा हडप्न मस्जिद भत्काउने काम गरेको बताए । यसअघि पनि पटक–पटक भूमाफियाले जग्गामा आँखा लगाएर मुस्लिम समुदायलाई धम्क्याउँदै आएको अध्यक्ष अन्सारीले बताए ।
यस्तै मस्जिद रहेको काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. २२ की वडा सदस्य गीता परियारले वडाध्यक्षको संलग्नतामा केही भूमाफियाले सधैँ मस्जिद खाली गर्न धम्क्याउने गरेको बताए ।
यो घटनाको मुस्लिम सङ्‍घले समेत विरोध गरेको छ । मुस्लिम सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल सतारले यो घटना मस्जिदमाथिको आक्रमण मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपाली मुस्लिममाथिको आक्रमण भएको बताए ।
यो मुसफिर मदिनी मस्जिद २०७२ सालको भूकम्पले धरहरा ढल्दा क्षतिग्रस्त बनेको थियो । यसलाई मुस्लिम समुदायले अस्थायी रुपमा संरचना बनाइ प्रयोग गरिरहेका छन् । आजभन्दा एक सय वर्षअघि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू काठमाण्डौ आउजाउ गर्दा नमाज पढ्ने स्थानको रुपमा स्थापित भएको यो मस्जिदमा अहिले चार प्रहरको नमाज पढ्न मुस्लिम समुदाय पुग्ने गरेका छन् ।
<<< : ‘क्लिन फिड’ नभएका १२० च्यानल बन्द, ‘क्लिन फिड’ किन आवश्यक ?
आगामी महिना कोभिडको समस्या थप बढ्ने : डब्ल्यूएचओ : >>>
नेपाली सेनाले रोक्यो दक्षिण सुडानमा फैलिन थालेको जातीय हिंसा